Alakamisy Febroary 28, 2013 Alatsinainy 1 Febroary 2016 Douglas Karr
Androany nahafinaritra aho niaraka tamin'ny ekipa tranonkala ao amin'ny Angie's List. Ny List's Angie dia namolavola ny tranonkalany ho tranomboky loharanon-karena tsy mampino… ary nandritra ny fotoana rehetra dia nanohy nanafaingana ny tranonkalany izy ireo. Haingam-pandeha mahamenatra ny pejin'izy ireo. Raha tsy mino ahy ianao dia apetaho amin'ny Garage Doors ity pejy ity. Ny pejy dia mampiditra sary, horonan-tsary ary bokotra sosialy… ary mbola mavesatra ao anatin'ny milliseconds. Ny fampitahana ny tranonkalany amin'ny ahy dia toy ny hazakazaka
Vimeo dia mahazo ny fizarana Video Market: fifamoivoizana miakatra 269%
Alahady, Septambra 12, 2010 Alatsinainy, Septambra 13, 2010 Douglas Karr
Vao tsy ela akory izay, nanao fikarohana be dia be tamin'ny vidéo ho an'ny mpanjifako aho. Ny horonan-tsary dia nanjary antony lehibe teo amin'ny traikefa an-tserasera; raha ny marina dia misy ny vintana mety hialan'ny mpitsidika isan-jaton'ny mpitsidika tsara ny tranokalanao raha tsy manome horonantsary ianao. Misy finday marani-tsaina vaovao havaozina ho an'ny horonantsary ary mikiakiaka ny mpijery. Youtube no milina fikarohana lehibe indrindra faharoa amin'ny Internet. Fa ny sehatra video hafa dia